कर्मचारी -: कर्मचारी कम राजनितिक कार्यकर्ता बढी । कारण, भोली सरुवा बढुवामा नेता चाहिन्छ , झुक्किएर केहि गरी भ्रस्टाचार गरेको थाहा पाइहाल्यो भने निकाल्ने नेता नै हो । आफ्नो सरकार आयो भने त झन आफ्नो हात जगन्नाथ ।
शिक्षक -: शिक्षक कम राजनितिक कार्यकर्ता बढी ।
कारण, भोली सरुवा बढुवामा नेता चाहिन्छ, भोली ताक पर्दा राजिनामा गरेर राजनिती गर्ने हो प्लेट फर्म बनाइराख्न पर्‍यो, नपढाइ तलब चप्काउनु पर्छ आफ्नो बिरोधमा कोही नबोलिदियोस, कार्यक्षमता गोली मारौ भोली सम्मान र तक्मा खान नेता नभै हुँदैन । त्यही नेताको लगौटिको फेर समातेर धेरै स्वार्थ लुट्नु छ ।
पत्रकार:- पत्रकार कम राजनितिक कार्यकर्ता बढी ।
कारण, पत्रकारिताले खान पुग्दैन, एन जि ओ, आइ एन जि ओ को जागिर खुवाउने त्यही नेता चहियो, सोझो औंलाले घिउ आउँदैन बेला बेलामा औंला बाङ्गो बनाउने बानी छ त्यसैले पित पत्रकारिता घुसाइन्छ र त कहिले काही मुठा ठुलै पाइन्छ । अरुले थाहा पाए बर्वाद । बचाउने नेता नै हो । राजनिती जिन्दावाद ।
डक्टर :- डक्टर कम राजनितिका कार्यकर्ता बढी ।
कारण, डक्टर बन्न ठुलै रकम धुलो पारियाछ दुर्गममा पुगेर लगानी कसले उठाउनी ? सुगममा सरुवा मिलाईदिने नेता नै हो । फेरी ठुलो हस्पिटल मा काम मिलाईदिने नेता नै हो किनकी उनैका ठुला हस्पिटल छन । फेरी प्राइभेट तिर काम गर्न कुदिहाल्नु पर्छ, भोली खेदो खन्लान बचाउने नेता नै हो त्यसैले राजनिती गर्नै पर्‍यो ।
वकिल :- वकिल कम राजनितिक कार्यकर्ता बढी ।
कारण, बिशुद्द गैह्रराजनितिक पेशाकर्मी बनौ बाच्नै गाह्रो, मुद्दा मामला पाउनै कठिन, राजनैतिक फेर समाते त्यतैबाट मुद्दा पाइन सकिने । भोली श्रीमान हुने मौकामा चौका ठोक्न बिना नेता कसको तागत । नेता र यिनका कार्यकर्ताको उधुममा राम्रै खेती लाग्ने भए पछी कोहिकिन आखा चिम्लियोस राजनितिमा ।
विधार्थी :- विद्यार्थी कम राजनितिक कार्यकर्ता बढी ।
कारण, नपढी ठुलो हुन पाउने माध्यम नेता गिरि, झन्डा र डन्डा समातेकै भरमा मासु भात फ्री, झन बाइक र तेल पनि आक्कल झुक्कल उडाउन पाइनी । पढेको गुनेको भए पो जागिर पाइनी ? खान परिगो औंला बाङ्गो नबनाइ सुखै हुँदैन । अनि प्रहरिले ज्याप हान्या बेला स्कुल कलेज बन्द गरिदिनी कसले, अनि प्रहरिबाट छुटाइदिने खेताला त बनाउनै पर्‍यो ।
ब्यबसायि:- ब्यबसायी कम राजनितिक कार्यकर्ता बढी ।
कारण, सबैको अगाडी ठुलो हुनु पर्‍या छ । ठुलो हुने माध्यम राजनिती नै हो । भोली ब्यबसायिक लाभ बिना पहुच पाउन सक्ने होईन । भोली अनेक थरि आयत, निर्यात, कर्, राजस्व आदिमा औंलाअ नघुमाए छिटो धनी कसरी हुनि ? अनि औंला गुमाउदा नजरलाउने नजरेहरुलाई मन्सिने राजनिती नै हो । यदी झुक्किएर बिधी बिधानले चिरिप्प पार्यो भने छुटाउने हूस्सु को त भन्दा राजनैतिक ब्यक्तित्व हरु । अनि राजनिती नगरे र भो त ?
कलाकार:- कलाकार कम राजनितिक कार्यकर्ता बढी ।
कारण, कलाकारिता दिगो हुँदैन । भोली माथी उक्लने भर्याङ राजनिती नै हो । त्यहाँ पनि ठुलै भाग आउछ , लेराएर कसैले टक्र्याउदैन । तान्नु पर्‍यो, हान्नु पर्‍यो । सबै राजनितिले नै गर्छ । आफु बन्नी हो । नेता कै फेरमा कल्याण छ । अनि गर्नी के ।
( हुन त सबै एस्तो हुनुहुन्न होला, सोझो पेशागत मर्यादामा रमाउने हरु पनि हुनुहुन्छ । तर अधिकास ब्यक्तित्व माथी उल्लेख गरेजस्तै छन्)
मान्छे यस्तो यथार्थबाट अपरिचित छैन । तर पनि बिज्ञाता र सभ्यताको खस्टो ओडेर भन्छ " पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम" अनि फेरी भन्छ " नेताले देश बिगारे" ।
यहाँ नेताले देश बिगारे अनि हामिले नेता बिगार्यौ । यि र यस्ता मोटिभ लिएर राजनितिको खास्टोमा हामी बेरिन्छौ अनि दोस अरुलाई देखाएर निर्दोस बन्न खोज्छौ । यहाँ फोहरि राजनितिले देश बिगार्यो म अब फोहरि राजनिती सफा गर्छु भन्ने सकल्पले कती जना राजनितिमा होमिएको होला ? सोचौ त ? देख्यो तपाइको अन्तर आत्माले कसैलाई ? यसर्थ यहाँअ कारण को त ? आज राजनितिमा होमिएका युबाको ठुलो पङ्ती छ यहाँ जो हिजो तीनइहरुलाई समातेर राजनितिको भङगालोमा होम्ने नेता जस्तै औंला घुमाएर घिउ खाने अबसरको रुपमा राजनितिको उपायोग गर्ने । कोही छैन यहाँ आफुलाई सभ्य राजनितिको बिकासको साधन बनाउने । तर धेरै छन राजनितिलाई आफ्नो मात्र बिकासको साधन बनाउने । यसर्थ साच्चै देस बनाउने हो भने सबै सुध्रनु जरुरी छ होईन भने जसो जसो पण्डित बाजे सोही सोही स्वाहा हो ।
निलकण्ठ न.पा-८ धादिङ